LeadSift: Ampiasao ny fivarotana ara-tsosialy hahazoana ny fitarihana | Martech Zone
LeadSift: Ampiasao ny fivarotana ara-tsosialy hahazoana ny fitarihana
Asabotsy, Aogositra 3, 2013 Zoma, Aogositra 2, 2013 Douglas Karr
78% Ny mpivarotra mampiasa media sosialy manafaha ny namany. LeadSift nandefa ny sehatra rahona izay mamaky resaka an-tapitrisany manerana ny fantsona media sosialy hitadiavana sy hitondrana mety hitarika any amin'ny orinasa ary manome metrika fitaritana manasokajy ny fikasana ihany koa. Manamora ny foto-kevitry ny fivarotana ara-tsosialy izy io ary mahatonga anao sy ny ekipanao hahomby kokoa ary hahomby amin'ny fizotran'ny varotra amin'ny alàlan'ny fampiraisana tsy tapaka amin'ny CRM.
Ny LeadSift dia manamora ny fandefasana tari-dàlana mifandraika amin'izany.
Sivano amin'ny tabataba - Ny LeadSift dia mahita ny resadresaka amin'ny haino aman-jery sosialy izay manandanja anao ary manala ny resaka tsy misy ifandraisany.
Manafaha fitarihana kalitao - Leadsift dia mijery demografika, psychografika ary resaka efa misy an'ny mpampiasa mba hahazoana antoka fa misy ifandraisany ny fitarihanao.
Mirotsaha amin'ny Ease - Araho ny firaka LeadSift amin'ny sehatry ny fifandraisan'izy ireo ary mifanerasera amin'izy ireo hananganana ny fifandraisan'ny mpanjifanao.
Tags: mahita fitarihana amin'ny InternetLeadsfitarihanafitarihana ara-tsosialyfahazoana media sosialy
Mamorona, mizara ary miantraika ny KPI an'ny orinasanao
Paikady voaporofo hampitomboana ny fivezivezena amin'ny tranokala